Galmudug oo soo gudbisay liiska Xubnaha ku matalaya Guddiga doorashooyinka | KEYDMEDIA ONLINE
Waraaq kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa lagu soo magacaabay xubnaha Galmudug ku matalaya guddiga doorashooyinka iyo guddiga xallinta khilaafaadka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida lagu heshiiyay shirkii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee lagu soo gabagabeeyay Villa Soomaaliya waxaa lagu heshiiyay in la sameeyo guddi doorasho iyo guddi xallin khilaafaad isku dhaf ah oo laga soo kala xulo dowlad goboleedyada, gobolka benaadir iyo dowladda dhexe, maamulka uu madaxda ka yahay Qoor-Qoor ee xaruntiisu tahay Dhuusamareeb waxaa lag soo saaray waraaq lagu soo magacaabay xubnaha galmudug ku matalaya doorashooyinka.
Liibaan Axmed Xasan iyo Cabdicasiis Cabdiraxmaan Yuusuf ayaa loo magacaabay in ay kamid noqdaan guddiga doorashooyinka heer federaal, iyagoo matalaya dowlad goboleedka Glmudug.
Garaad Guusuf Maxamuud iyo Mustaf Macallin Cali Salaad ayaa sidoo kale loo magacaabay in kamid noqdaan guddiga xallinta khilaafaadka, iyagoo matali doona dowlad goboleedka Galmudug.
Galmudug ayaa noqoneysa dowlad goboleedkii 4-aad ee soo magacaaba xubnaha ku matalaya guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya kaasoo la filayo in ay dhawaan shaqo billaabaan, sida ku cad heshiiskii ku saabsanaa doorashooyinka ee Villa soomaaliya lagu soo gabagabeeyay waxaa lagu ballansanaa in 1-da November la aado doorashooyin, kahorna lasoo dhammeystiro xubnaha guddiyada doorashada iyo xallinta khilaafaadka ee isku dhafka ah.
Waxaa harsan oo aan weli soo gudbin xubnaha ku matalaya Dowlad goboleedka Hirshabeelle oo doorasho ku jira iyo sidoo kale maamulka gobolka Benaadir oo isna qeyb ka ah heshiiska.